Tafiditra ao anatin’ilay hetsika Techfest ny fifaninanana, hetsika izay anisan’ny goavana indrindra eo amin’ny fikirakirana ny teknolojia vaovao any Azia. Anisan’ny mandray andraikitra feno amin’ny fandefasana azy dimy mirahalahy ireto any Inde ny orinasam-pifandraisana Airtel. Mbola izy ireo ihany koa no niantoka ireo tanora Malagasy nandray anjara tamin’ilay fifaninanana First Global Challenge natao tany Mexico Whasington, volana vitsivitsy lasa izay. Tanjon’izy ireo ny hahafahana manohana sy mikarakara tanora Malagasy manan-talenta tahaka izao hahafahany mivelatra amin’ny fiainana, indrindra hitondra avo ny anaram-boninahitr’i Madagasikara. Tsara ny manamarika ho azy dimy mianadahy ireto fa maro amin’izy ireo no efa nibata karazana amboara tamin’ny ezaka nataony. Ho an’i Irina Razafiarison 20 taona sy Diamondra Rasoamanana 19 taona ohatra dia efa nahazo medaly alimo avokoa izy ireo tamin’ilay fifaninanana First Global Challenge nandraisany anjara tamin’ny taona 2017.